Safiir Ku-Xigeenka Britian ee Somalia oo Garoowe Timid-Sawiro • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Safiir Ku-Xigeenka Britian ee Somalia oo Garoowe Timid-Sawiro
Safiir Ku-Xigeenka Britian ee Somalia oo Garoowe Timid-Sawiro
September 11, 2017 - By: Cumar Mohamed
Safiir k/xigeenka safaaradda Ingiriiska (Britian) ee Somaliya Ms Mary Shockledge oo soo gaartay caasimadda Garoowe ayaa qasriga madaxtooyada Puntland waxaa ku qaabilay Madaxweyne Ku-xigeenka Dawladda Puntland, ahna kusimaha Madaxweynaha Eng. Cabdixajiin Xaaji Cabdullahi Cumar Camey.
Kullan saacad qaatay ka dib, ayaa Madaxweyne Ku-xigeenka iyo safiirku waxay qabteen shir jaraa’id, waxayna sheegeen in kullankooda ay kaga wadahadleen arrimo ay kamid ahaayeen ammaanka, nabad gelyada, doorashada Puntland, iyo arrimo kale oo muhiima.
Madaxweyne k/xigeenka wuxuu sheegay inay si qoto dheer uga hadleen arrinta abaaraha, taas oo uu xusay in ay kala hadleen kuxigeenka safiirka Ingiriiska iyo weftiga ay hogaaminayso qodaalka ceel-biyoodyo lagaga gaashaanto abaarta iyo sidoo kale in ceelashaasi lagaga faa’idaysan doono ku dhiirashada falashada beeraha.
wuxuu tilmaamay inay ka wada hadleen kalluumaysiga Puntland, isagoo tibaaxay inay arrintaasi isku afgarteen wax ka qabashadeeda, isla mar’ahaantaana waxa uu cadeeyey Madaxweyne Camey in ay dhammaan arrimaha ay ka wadda hadleen ka ahaayeen isku mawqif ama isku hadaf dhowaana ay hirgelidoonto bar-bilawgoodu.
Farmaajo oo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Adxa
August 20, 2018 By Abdirisak Faamoos
Booqashadii madaxweyne Farmaajo iyo bogaadintii Turkiga-Sawiro
Wasiirka Maaliyada oo maanta kormeer ku tagay dekeda Muqdisho-Sawiro
Dowlada Soomaaliya oo dib u howlgalinaysa Tiyaatarka qaranka-Sawiro
Madaxweyne Gaas oo kala diray Golihii deegaanka degmada Badhan